သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာတစ်ယောက် အမေရိကားကိုသွားရင်း ၂လနီးပါးကြာသွားပါတယ်တဲ့။ ဒီလိုမျိုး သားလေးနဲ့ ၂လနီးပါး ခွဲခွာပြီး သူမအပြန်လေဆိပ်မှာ သားအမိနှစ်ယောက် တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်ငိုခဲ့ကြတာပါ။
ဆုပန်ထွာက သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ” 15.11.2019 ဘာမှန်းညာမှန်းမသိလိုက်ပဲ မထင်မှတ်ပဲ သားလေးနဲ့ ခွဲနေလိုက်ရတာ ၂ လနီးပါး။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ၊ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတွေဦးစားပေးရင်း…… မိသားစုအတွက်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Target မရောက်မချင်း ကြိ်တ်မှိတ်နေခဲ့ရသော America! သားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန် မအေကိုအံ့သြပြီး ကြည့်နေတဲ့သားလေး။ မေမေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဆီပြေးလာပြီး ဖက်ထားလိုက်တာများ၊ သနားပါတယ်။ သူ့ခမျာ နှာရေတေကျ၊ သိပ်နေမကောင်းရှာဘူး။ နုတ်ခမ်းလေးတွေလည်းခြောက်လို့။ ပိန်သွားလိုက်တာများ တွေ့တဲ့အချိန်ရင်ထဲမှာဆို့နေတာပဲ။ သူ့ကိုဖက်ထားမိတာမလွှတ်ရက်ဘူး” လို့ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“သူ့အဖေက လေယျာဉ်ပျံကြီးတွေသွားကြည့်ကြမယ်သားရေ” လို့ပြောပြီးခေါ်လာတာတဲ့။ သူလည်းအမေကို အမှတ်မထင်တွေ့၊ကိုယ်လည်းသူ့ကိုအားရပါးရဖက်ရင်း… မထင်မှတ်ပဲ America မှာကြာသွားတဲ့အချိန် ကိုယ့်ကလေးကိုမြင်ပြီး မဖက်ရတဲ့ဘဝ တော်တော်ဆိုးခဲ့တာကိုး။ ကလေးနဲ့မထင်မှတ်ပဲ အကြာကြီးခွဲရတာမို့ လောကကြီးရဲ့ လှည့်ကွက်တွေ၊ ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတာတွေကလူ့ဘဝမှာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရင်နှင့်ရင်းပြီးရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပါပဲ။ ပြန်ရောက်တဲ့နေ့ကတည်းကသူ့အဖေပုံလေးတွေရိုက်ထားပေးပေမယ့် သားအမိနှစ်ယောက်တပူးတတွဲတွဲ ဖက်မဝ ချစ်နလန်ထနေကြတာမအား… ပြနရောက်ကတည်းကလည်း မာမား မခေါ်တော့ဘူး၊ “မေမေ” တဲ့။
မေမေဘယ်မှမသွားနဲ။ မေမေ ဖုန်းမကိုင်နဲ့၊ဘယ်သူနဲ့မှစကားလည်းမပြောနဲ့! Roar Roar ကိုပဲကြည့်နေနော်တဲ့။ သနားစရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေး” ဆိုပြီးလည်း ဆုပန်ထွာက ရေးသားထားပါသေးတယ်။
သူမက ဒါဟာ သားလေးအိပ်နေတုန်း မြန်မြန်ချရေးလိုက်တဲ့စာလေးဖြစ်ပြီး သားလေးနဲ့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန် သားအမိနှစ်ယောက်ဖက်ငိုနေကြတဲ့ Video လေးကိုတော့ မတင်တော့ပါဘူး၊ သားလေးရော ကိုယ်ရောပျော်နေတဲ့ Video လေးတော့တင်ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
ဆုပန်ထွာတို့ သားအမိရဲ့ ကြည်နူးစဖွယ် မျက်ရည်ကျရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးနဲ့ မိခင်မေတ္တာကို အပြည့်အဝမြင်နိုင်မယ့် ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီး ပြန်လည်ခံစားနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
မချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် ပြန်တွေးတိုင်း အရမ်းဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့ နေလင်းကျော်
ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ငိုနေတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်မကျအောင် ထိန်းခဲ့ရတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်